Khariidadda Marmaray | RayHaber | raillynews
Marmaray map iyo jadwalka marmaray
Khariidadda Marmaray iyo Halkalı Joojinta iyo Jadwalka Gebze Marmaray: Marmaray, mashruuca isku xiraya Yurub iyo Anatolian Side ee Istanbul Halkalı Waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka ku saabsan joogsiyada iyo waqtiyada tareenka Gebze ee ku jira mawduucan. Halkalı Khadka Gebze Suburban 2019 waxaa ka mid ah khadadka dib loo cusbooneysiiyay oo ku dhex jira baaxadda mashruuca Marmaray. Halkalı Warkaan waxaan ku siineynaa macluumaad ku saabsan Xargaha Xariiqda Gebze Metro Line Halkalı Waxaad ka heli kartaa dhammaan faahfaahinta ku saabsan Saacadaha Safarka Marmaray.
Waxay ku taal dhinaca Yurub Halkalıwaxayna bilaabaan Gebze. Dhinaca Yurub Halkalı iyo Kazlıçeşme Marmaray, halka kooxda Anatolia ay gaadiid ka qaadayaan inta u dhexeysa Ayrılık Fountain iyo Gebze. Dadka reer Istanbul aad bay u ogyihiin in talaabada ugu horeysa ee mashruucan uu qaaday khadka Kazlıçeşme Separation Fountain kaas oo isku xiraya Anatolian Side iyo Yurub Side.
Marmaray Halkalı Ku Saabsan Mashruuca Khadka Gebze
Obrascon Huarte Lain SA oo ku taal magaalada Dimetronic SA Joint Venture 1 bilyan EUR mudan yahay hindisada 76.6 km dheer, Gebze Pendik Ayrılıkçeşme Sirkeci Zeytinburnu Bakırköy Halkalı Kadib furitaanka khadka Marmaray, 75 kun oo rakaab ah ayaa lagu rari doonaa hal jiho halka 96 kun oo rakaab ah ay qaadi doonaan xNUMX kun oo baabuur maalin kasta. Safarada 28 saacaddiiba qorsheeyay Xarunta 43Saldhigyada qaar ee khadka l, tareenka waaweyn iyo tareenada xawaaraha sare ayaa sidoo kale joogsan doona. Khadkan, oo lagu dhexgali doono mitirka iyo taraamka ee Istanbul marka la dhammaystiro, ayaa loo qorsheeyay in si weyn loo fududeeyo isu socodka xeebaha iyo E-5 ee labada dhinac ee magaalada.
KA HELI KARO MAPI Riix halkan
Halkalı Goobaha mitirka Gebze
Waxay leedahay jidka weyn ee ugu dheer magaalada Istanbul Halkalı Wadarta Gebze Metro 42 xero Laga soo bilaabo istaaggan 14 dhinaca Yurub, inta soo hartay 28 joogsiga wuxuu ku yaal dhinaca Anatolian.
Halkalı Mustafa Kemal Kucukcekmece Florya Yesilkoy Yesilyurt Atakoy Bakirkoy Yenimahalle Zeytinburnu Kazlicesme Yenikapi Sirkeci Uskudar Kalasaarka Fountain Sogutlucesme Feneryolu Goztepe Erenkoy Suadiye Bostanci Kucukyali Idealtepe Sureyya Beach Maltepe Cevizli Ayeeyada Basak Kartal Yunus Pendik Kaynarca Shipyard Aydıntepe İçmeler Tuzla Cayirova Fatih Osmangazi Darica Gebze
Halkalı Saacadaha Wadada Gebze Subway
Halkalı Sida aan kor ku soo sheegnay ee dhulka hoostiisa mara ee Gebze Xarun 42 ku yaal. Halkalı iyo wadarta guud ee u dhaxeeya joojinta Gebze waxay hoos ugu dhici doontaa daqiiqado 115. Si kooban Halkalıbixitaanka 115 daqiiqo kuwaas oo 1 saacadood 55 daqiiqo wuxuu ku jiri doonaa Gebze. Fadlan eeg Khariidadda Marmaray wixii macluumaad dheeri ah!
Halkalı Goobaha Kala-wareejinta ee Gebze
Halkalı Waxaa jira meelo badan oo kala iibsiga ah oo ku yaala Gebze Metro. Halkalı Hoos waxaa ku yaal sadarka metrooga (joogsiga) ee aad ku wareejin doonto khadka Gebze Metro Line:
T1 Kabataş-Bağcılar khadka tareenka iyo wareejinta badda ee saldhigga Sirkeci
Khadka tareenka metro M4 Kadıköy-Tuzla waxaa lagu wareejiyaa xarunta Ayrılık Çeşmesi
İçmeler M4 Kadıköy-Tuzla metro line wareejinta xarunta tareenka
Halkalı Wadada Gebze Subway iyo Isku xirka Xiisaha Ankara
ka Gebze Halkalımasaafada u jirta kiloomitir 76,6 £ 5,70 marka la go'aaminayo lacagta oo dhan, ardayda ayaa noqon doonta £ 2,75 Waxay bixisaa. Rakaabka waa £ 2,60 la £ 5,70halka ardayda £ 1,25 la £ 2,75 bixiyaa inta u dhaxaysa.
ka Gebze HalkalıKhidmadda ugu badan ee kiloomitir 76,6 waxaa go'aamiya xNUMX buuxa ee TL, halka ardayda ay ku bixiyaan 5,70 TL masaafadan. Rakaabku waxay bixiyaan inta udhaxeysa 2,75 TL iyo 2,60 TL ardaydana waxay bixiyaan inta udhaxeysa 5,70 TL iyo 1,25 TL marka loo eego tirada saldhigyada ay adeegsadaan.
Waxaa jira xarumo afartan iyo saddex saldhig ah oo kujira khadka Xm ee 76,6 kiiloomitir Marmaray, dhammaantoodna waxay leeyihiin naafo helitaan. Galbeedka ilaa bari siday u kala horreeyaan Halkalı, Mustafa Kemal, Kucukcekmece, Florya, Florya Aquarium, Yesilkoy, Yesilyurt, Atakoy, Bakirkoy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlicesme, Yenikapi, Sirkeci, Uskudar, Fountain, Sogutlucesme, Feneryolu, Gopete, Bopete Sureyya Beach, Maltepe, Cevizli, Ancestors, Virgo, Eagle, Dolphin, Pendik, Kaynarca, Shipyard, Guzelyali, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Cayirova, Fatih, Osmangazi, Darica iyo saldhigyada Gebze ayaa shaqeeya. Saldhigyada Sirkeci, Üsküdar iyo Yenikapı waa kuwo dhulka hoostiisa mara oo saldhigyo kale ayaa ka sarreeya dhulka.
Laga soo bilaabo xarumaha Ayrılık, Üsküdar iyo Yenikapı ilaa metrooka Istanbul; Saldhigyada Kucukcekmece iyo Sogutlucesme ilaa metrobus, saldhigga Sirkeci illaa taraam, Saldhigga Yenikapi waxaa loo gudbin karaa doonta IDO. Xadka celceliska saldhigga waa 1,9 km. Dhererka saldhiggu waa ugu yaraan mitir 225.
Marka lagu gudajiro marxaladda soo saarista gawaarida CR2 Gawaarida Tareenka, ilaa sanadka 2013, wadarta gawaarida 38 ee 10, oo ka kooban gawaarida 12 oo ay wehliyaan maraakiibta 5 iyo 440 baabuur oo wata xamuul 50, ayaa laga keenay Koonfurta Kuuriya. 586 set oo ka kooban kaliya gawaarida 5 ee wadarta qiimaha xNUMX milyan oo doolar, ayaa la geliyay adeegga 12 iyada oo la bilaabayo qaybta magaalada ee u dhaxaysa Ayrılıkçeşme iyo Kazlıçeşme. looma adeegsan karo. Muddooyinka la helay 2013 ayaa wali lagu arkaa iyagoo jooga Xarunta Tareenka ee Haydarpaşa.
Marmaray Caymiska: Shirkadda 30 waxay caymisey Marmaray
Marmaray Regional Director ayaa sheegtay in Marmaray ay ka dillaacday
Mashruuca cusub ee Marmaray wuxuu joojinayaa (New Marmaray IETT lines)
Mashruuca Nidaamyada Tareenada TCDD Khariidadda Horumarinta Taariikhda
Khariidadda TCDD Tareenka Xawaaraha Sare
Europe rô-La Tareen Route Map iyo Turkey
Khariidadda Tareenka TCDD - Xallinta Sare
Khariidadda Eurasia Railways - Xaqiiqo Badan